Middle Atlantic[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New England[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Santa Catalina Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Mendocino[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Orange[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Santa Barbara Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Diego[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Anacapa Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Georgia[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Camden[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Chatham[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Glynn[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
McIntosh[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Jefferson[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Vermilion[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Massachusetts[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nantucket[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New Jersey[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Cape May[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ocean[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South Carolina[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Beaufort[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Charleston[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Georgetown[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Baja California[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Oaxaca[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Stann Creek[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Toledo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Belize Cayes[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
El Salvador[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Honduras[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bermuda[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bimini[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Mayaguana[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Artemisa[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
West Caicos Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
North Caicos[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Middle Caicos[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South Caicos[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
East Caicos Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ambergris Cays[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Turks Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Grand Turk[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Salt Cay[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
United States Virgin Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Saint Croix[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Saint-Martin[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Antigua and Barbuda[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Antigua[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Saint John's[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Redonda[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Désirade[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Martinique[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Fort-de-France[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Trinité[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Barbados[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Saint Michael[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bonaire, Sint Eustatius and Saba[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sint-Maarten[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Curaçao[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Guyanas[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Pomeroon-Supenaam[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ecuador[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Guayas & Santa Elena[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Santa Elena[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Isla de la Plata[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Insular[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South Brazil[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Santa Catarina[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Continental Europe[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Western Europe[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Britain and Ireland[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
British Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
United Kingdom[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Great Britain (UK)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
England[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South East[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Isle of Wight[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South West[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
France[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Pays de la Loire[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Vendée[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Portugal[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Acores[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Graciosa (Acores)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Pico (Acores)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Faial (Acores)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Spain[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Spain (mainland)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Andalucía[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Cádiz[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
País Vasco[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Northern Africa[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Morocco[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Western Sahara[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Egypt[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Western Africa[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Côte d'Ivoire[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Equatorial Guinea[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Djibouti[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Obock[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South Africa[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Cape Verde[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Barlavento[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Boa Vista[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sotavento[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Principe[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Madagascar[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Toamasina[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Booby Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
île Aride[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bird Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Israel[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
United Arab Emirates[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Fujayrah[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sharjah[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Kuwait[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Al Jahrah[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Iran[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Hormozgan[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sistan and Baluchestan[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
အိႎၬိယ[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Andaman and Nicobar[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nicobar[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Arid northwest[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Gujarat[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Jamnagar and Devbhoomi Dwarka[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Kachchh[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Porbandar[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Southeast[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Pondicherry[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Mahe[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Maldives[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Korea (North & South)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South Korea[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Honshu[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Honshu (North)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Chubu[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ishikawa[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Hegura-jima[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Wajima[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Niigata[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sado Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tokyo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Honshu (South)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Kyushu and Shikoku[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Okinawa[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bonin Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Taiwan[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Taiwan (province)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Hualien[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ilan[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Keelung[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Taitung[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New Taipei[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Fujian[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Lienchiang[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Hong Kong[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Vietnam[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Malaysia[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sarawak[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sabah[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Malay Peninsula[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Singapore[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
North East[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Island of Borneo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Louisiade Archipelago[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New Ireland Archipelago[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New Britain Archipelago[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New South Wales[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tweed[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tweed - Tweed Coast[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tweed - Tweed-Heads[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ballina[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Clarence Valley[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Kempsey[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Unincorp. Far West[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Great Lakes[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Newcastle[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Newcastle - Inner City[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Manly[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Randwick[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Wollongong[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Shoalhaven[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New South Wales - NSW North Coast[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New South Wales - South Eastern Queensland[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New South Wales - Sydney Basin[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Erub[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bramble Cay[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New Zealand (mainland)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
South Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
West Coast [ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
North Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Auckland[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Franklin District[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Miranda Shorebird Center[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Northland[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Waikato[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Hauraki District[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Rota[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Solomons archipelago[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Solomon Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Choiseul Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Rob Roy[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Muzo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Noapua[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Edeye[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Small Maleivona[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Big Maleivona[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Suki[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Raputalavata[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Haycock Isl #6[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Susuku[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Urungo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Raverave[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Haycock[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ghire[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tema Soi[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Laena Rock[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Haycock Stack#2[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Wagina[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ondolau[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Salakana[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sunda[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Taro Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Arnavon Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sikopo Outpost[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sikopo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Kerehikapa[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Central Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Buraku[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Florida Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Vatilau[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Florida Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tulagi[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Gavutu[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tanambogo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nggela Pile[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Mbokonimbeti[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Russell Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Mbanika[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Pavuvu[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Moie[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Guadalcanal Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Beagle[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Isabel Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Fara[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bates[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Jorge[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Molakobi[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ramos[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Malakobi[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ghaghe[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Barora Fa'[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nidero[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Omona[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Makira-Ulawa Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Santa Anna[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Awa Kaba[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Santa Catalina[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Three Sisters[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Uki Ni Masi[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Cristobal[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Yanuta Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Malaita Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ontong Java[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Malaita[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Maramasike[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Gower[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Rennell and Bellona Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bellona[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Temotu Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Duff Group[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Taumako[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bass Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Reef Group[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Reef[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Pileni[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nifiloli[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ngandeli[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Matema Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nalongo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nupani[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nukapu[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Makalom[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Nendo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Utupua[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Vanikolo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tinakula[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tikopia[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Temotu Neo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Temotu Noi[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Western Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New Georgia Group[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Simbo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Gizo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Bambanga Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Shortland Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Oema[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Alu[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ballale[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Magusaisai[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Munia[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Onua[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Orlofe[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Poporang[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Masamasa[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ovau[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Akiki[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Treasury Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Mono[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Stierling[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Vanuatu[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Torba Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Shéfa Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Shepherd Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Taféa Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sanma Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Pénama Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ambae[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Malampa Province[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tokelau[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tuvalu[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Society Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Polynesia Windward Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Polynesia Leeward Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Huahine[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Raiatea[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Avibase သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး 286,087,482 24 ဇွန်လ 2003 ကတည်းကကြိမ်. © Denis Lepage | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ